Sina HFS andian-tsarimihetsika zezika andiany HFS | Fitaovana fanamaivanana Chengxin
Ny velaran'ny efijery zezika simika dia entin'ny fitaovana fampientanentanana, izay ampiasaina amin'ny fanasokajiana granularity fitaovana antonony sy tsara. Ny tena mampiavaka ny efijery zezika simika amin'ny firafitra dia ny: vibration exciter, double motor drive, vy tsy manara-penitra manakana ny tontolon'ny efijery, ary ny teknolojia mamirifiry mangatsiaka (welding nentin-drazana, ny teknolojia riveting mangatsiaka ho an'ny boaty efijery manana fihenjanana tsaratsara kokoa sy androm-piainana maharitra). Raha ny fitsipiky ny asa, ny efijery zezika simika HFS dia mampiasa ny fitsipika mety hamitana ny fizotran'ny fizahana manontolo amin'ny hafainganam-pandeha haingana be. Ny fotoana ilaina amin'ny fizahana ara-materialy dia 1/2 fotsiny an'ny an'ny efijery mahazatra, ary ny fahaizany manodina isaky ny faritra sieve faritra dia avo 2 heny noho ny an'ny efijery mahazatra. Noho izany, azo heverina fa ny fizahana amin'ny fisavana zezika simika dia an'ny "fitiliana haingana". Ho fanampin'izany, tsy mora ny manakana ny lavaky ny zezika amin'ny zezika simika. Ny milina fitiliana iray dia afaka mahazo vokatra haben'ny sombin-javatra marobe amin'ny fotoana iray, ary malalaka ny haben'ny fitiliana.
Ny efijery zezika simika HFS dia misy boaty fisintomana, exciter vibration ary fitaovana manohana. Ny tontolon'ny efijery dia apetraka eo amin'ny fonon'ny efijery. Ny velaran'ny efijery zezika zezika simika dia mihetsiketsika etsy sy eroa, ary mampiasa famaky inertia famaky roa sy motera roa hitondrana azy tsirairay avy. Ireo vondrona mpanaitaitra roa dia miasa amin'ny synchrony mifamadika mba hamoahana hery manaitaitra sy handroahana ny efijery, manery ny fitaovana hifindra amin'ny parabola ary hiditra ao anaty sosona. Ny fitaovana lamba amin'ny lamba zezika simika dia vy tsy misy fangarony, ny karazana lavaka dia karazana loaka fanakanana, ary ny filokana dia tsy filokana, fanakanana ary fifamatorana. Noho ny fampiasana efijery misy sosona roa, mihetsika amin'ny sosona ny fitaovana, manify ny fikorianan'ny fitaovana, mora kokoa ny fizahana, ary azo ampitomboina avo roa heny ny fahombiazany, izay tena maneho ny fitsipika ara-teknikan'ny fisavana ny mety.
Ny fikarohana ny efijery zezika simika HFS no lohalaharana ao Sina. Ny exciter ny zezika zezika simika dia vita amin'ny akorandriaka vy tsara miaraka amin'ny rafitry ny hazo roa. Ny hazo tsirairay dia mandray bearings roa. Izy io dia manana fahaiza-mitondra lehibe, fanosotra azo antoka ary afaka miasa tsy tapaka amin'ny mari-pana ambony sy ny vovoka avo.
Ny efijery zezika simika HFS dia havaozina amin'ny alàlan'ny famolavolana voalohany. Satria matetika ny efijery zezika simika dia apetraka amin'ny tranobe avo lenta, ny sehatra fanalefahana faharoa dia noforonina manokana, izay afaka manala farafahakeliny 3-5 heny ny valin'ny hovitrovitra, mampihena ny fiantraikan'ny fitaovana amin'ny gorodona, ary mahomby amin'ny ny fandidiana maharitra azo antoka an'ny mpampiasa. Ity teknolojia ity dia novelarina amin'ny endriny ary mitarika any Sina.
Previous: Efijery roller GZS
Manaraka: SZR andian-tsarimihetsika mafana mihetsiketsika
Sarin'ny vokatra zezika
Sarimihetsika zezika voadidy tsara
Efijery zezika goavambe
Masinina fitiliana zezika voajanahary